मान्छेको मन | डा. विश्वबन्धु शर्मा | Book View – Kiran Kumar
वरिष्ठ मानसिक चिकित्सक डा. विश्वबन्धु शर्माले चार दशक लामो आफ्नो सेवाकालमा अनुभूत गर्नुभएका अविष्मरणीय घटनाहरुको सँगालो हो– ‘मान्छेको मन’ ।
मानसिक रोग, खासमा रोग नभएर समस्या हो । हामीकहाँ मानसिक समस्यालाई बौलाउनु/बौलायो भनेर बुझिन्छ । मानसिक समस्या भएकालाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यति राम्रो पाइदैन । मानसिक समस्या देखिएपछि उस्को जिन्दगी नै सकियो भन्ने किसिमले हेरिन्छ । र बिरामीले पनि त्यस्तै किसिमले लिने भएकाले मानसिक समस्यालाई लुकाएर राख्ने गरेको पाइन्छ । अरूले के भन्ला भन्ने मानसिकताले समस्यालाई समयमै समाधान गर्ने, डाक्टर(मनोचिकित्सक)कोमा जाने गरेको पाइँदैन । यसले समस्या झन् जटिल हुन्छ । समयमै उपचार सुरु गरे समस्या सजिलै निको हुने सम्भावना धेरै हुने रहेछ ।
मानसिक समस्या भनेर सामान्यतया हामी डिप्रेशन/बिर्सने लाई बुझ्छौ अर्थात् डिप्रेशन/बिर्सने समस्यालाई अलि बढि हाइलाइट गरिएको पाइन्छ । तर मानसिक समस्या पनि विभिन्न खालका हुँदा रहेछन् । हागाँविगाँ धेरै हुने रहेछ । जस्तो कि, सिजोफ्रनेया, एन्जाइटी, ओसीडी, छारेरोग, सुस्त मनस्थिती, साइकोसिस, आदी । यसका कारणहरू पनि भिन्नभिन्न खालका धेरै प्रकारका हुन्छन् । एउटै कारणले मानसिक समस्या भयो भन्न सकिन्न । व्यक्तिको वरपरको वातावरण, इच्छा, आकांक्षा, अ/सफलता, भोगाइ, बाध्यता, आदीले मानसिक समस्यालाई प्रभाव पार्छ । कतिपयअवस्थामा त मानसिक समस्या छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ । वातावरण परिवर्तन हुँदा वा दिनहरू बित्दै जादाँ त्यतिकै पनि समस्या समाधान हुन्छ । तर जतिसक्दो चाँडो मनोचिकित्सकलाई देखायो त्यतिनै चाँडो समस्या समाधान हुनसक्छ ।
नेपालमा मानिसक समस्यालाई उपचार गर्ने वातावरण सजिलो रहेछ । विदेशतिर विरामी स्वंयम् उपचार गर्छु नभनेसम्म उपचार गर्न निमल्ने हुने रहेछ । कतियप अवस्थामा त विरामी छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि उपचार दिन नसक्ने बाध्यताले विरामीको ज्यानै पनि जाने रहेछ । तर नेपालमा कानुन सहज भएकाले बेलैमा उपचार सहज रहेछ ।
केही दशकमा यससम्बन्धि उपचारमा नेपालमा उल्लेख सुधार भएको रहेछ । विरामीहरूमा पनि रोग लुकाउने समस्या घट्दो क्रममा रहेछ । डाक्टरकोमा आफै आउने रहेछन् । यो सकारात्मक पाटो हो । तर पनि मानिसक समस्यासँग सम्बन्धित जनचेतना अझ आम मानिसमा पुग्न सकेको रहेनछ । जस्तो कि अझै पनि राजधानीमै पनि देवि चड्यो, देउतासँग कुरा गर्न थाले भनेर धन्दा नै चलाएर बस्ने सयौँ छन्, टोलटोलमा छन् । यो पनि एकप्रकारको मानसिक समस्या रहेछ ।
मानसिक समस्याको उपचार गरेपछि समस्याबाट बिरामी तङ्ग्रदै गर्दा अल्लि बढी ध्यान दिनु पर्ने रहेछ । त्यो बेलामा उनिहरूको आत्मबल बढ्दै आउने रहेछ अनि आत्महत्याको विचार छिनमै आउने र आत्महत्या गरिहाल्ने पनि हुँदो रहेछ ।
पुस्तकको पछिल्लो भागमा डा. शर्माको बाल्यकाल, डाक्टरीको लागि रुसको यात्रा, डाक्टरी पेशाको तितामिठा अनुभव समेटिएका छन् । पुस्तकको सुरुमा एउटै आशयका धेरैवटा वाक्यहरू छन् । केही अल्छी लाग्दो पनि छ । सम्पादन गरेर छोट्याएको भएपनि हुन्थ्यो लाग्यो । तर पुस्तकमा मानसिक समस्या, उपचार तथा पेशासँग सम्वन्धित विभिन्न घट्ना तथा अनुभवले पुस्तक पढ्दा रमाइलो लाग्यो ।
मानसिक समस्या नेपालमा मात्र नभएर विश्वमा नै बढ्दै गइरहेको छ । यसबारे जनचेतना फैलाउने, समस्या नलुकाउन/बेलैमा उपचार गर्न प्रेरणा दिने तथा यसप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक बनाउनु पर्ने देखिन्छ । मानसिक समस्यालाई अरु रोग सहर सामान्यरुपमा लिनु पर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ । समस्यालाई लुकाइ राख्दा, उपचार नगर्दा, बिचैमा छोड्दा, निको भयो अब डाक्टरलाई देखाउन पर्दैन वा औषधी खानुपर्देन भनेर छोड्न समस्या झन् जटिल हुने रहेछ र बिरामीको ज्यानै जान पनि सक्ने हुँदो रहेछ । तसर्थ मानसिक समस्या बारे लेखिएको यो पुस्तक मानसिक समस्या बारे बुझ्नको लागि उपयोगी छ । यससँग सम्बन्धित पुस्तकहरू लेखिनु पर्दछ, चर्चा हुनु जरुरी छ ।
डा. विश्वबन्धु शर्मा मनोचिकित्सकका रूपमा मुलुकमै स्थापित नाम हो । पूर्व सोभियत संघबाट चिकित्साशात्र तथा मनोरोगशास्त्रमा अध्ययन गर्नुभएका डा. शर्मा विगत ३८ बर्षदेखि समाजका हरेक वर्ग र समुदायका मनोरूोगीहरूको उपचारमा क्रियाशिल हुनुहुन्छ ।
हा चाबहिलस्थित मेडिकेयर अस्पतालसँग सम्बद्ध उहाँ पत्रपत्रिकाहरूमा मानसिक स्वास्थसम्बन्धि जानकारीमूलक लेखहरू पनि लेख्ने गर्ने हुन्छ ।
यसअघि उहाँको मानसिक स्वास्थ्यका विविध अनुभव प्रकाशित छ । (पुस्तकबाट)
शिर्षकः मान्छेको मन
लेखकः डा. विश्वबन्धु शर्मा
प्रकाशन मितिः भदौ २०७६, पहिलो संस्करण
मूल्यः रू ४८५
Book ViewAutoBiography, book view, Dr. Bishwa Bandhu Sharma, manchheko mann, Memoirs, अध्ययन, अनुभव, जीवन, पेशा, भोगाइ, मानसिक समस्या, मान्छेको मन, यात्रा, संस्मरण